पृथ्वीनारायण शाहको कसम खाएर राजतन्त्रको एजेण्डासँगै राप्रपा छाड्दै कमल थापा ! - nepal day
पृथ्वीनारायण शाहको कसम खाएर राजतन्त्रको एजेण्डासँगै राप्रपा छाड्दै कमल थापा !
प्रकासन मिति : २७ पुष २०७८, मंगलवार १८:३६
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत विगत केही समयदेखि कमल थापाले राजतन्त्रविरुद्ध आगो ओकलिरहेका छन् । अब भने एक्सनमा उत्रिने भएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) औपचारिक रुपमै फुटको संघारमा पुगेको छ।
पार्टी अध्यक्षमा अप्रत्यासित हार ब्यहोरेपछि पूर्वअध्यक्ष कमल थापा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति रुष्ट छन्। उनले आफनो हारका पछाडि पूर्वराजाको हात रहेको भन्दै अव राजसंस्था वाहेक हिन्दुराष्ट्रको एजेण्ड लिएर अघि वढ्ने औपचारिक रुपमा घोषणा पनि गरिसकेका छन् ।
स्रोतका अनुसार थापाले वानेश्वरबाट नयाँ पार्टीको घोषणा गर्ने भएका छन् । पार्टीको नाम नै घोषणा नभएपनि राप्रपा फुटको औपचारिक विन्दु भने वानेश्वरलाई वनाउने थापाको तयारी छ। कमल थापासँग पुराना मण्डले, कुण्डलेलगायत सवै बानेश्वरमा देखिने छन्।
महाधिवेशनमा निर्वाचित उनी निकटका पदाधिकारी र सदस्यहरु भने अहिले लिङ्देनकै टिममा रहने छन् । लिङ्देनको टिममा कमल थापा पक्षकै वहुमत छ। उनीहरुले टिममै वसेर लिङ्देनलाई असहयोग गर्ने र अन्तिम अवस्थामा मात्रै थापा पक्षमा खुल्ने रणनीति वनेको स्रोत वताउँछ।
स्रोतका अनुसार त्यसबेला ज्ञानेन्द्रले संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा सहभागी नहुन थापालाई आग्रह गरेका थिए। तर, उनले ज्ञानेन्द्रको कुरामा वास्ता नगरी संविधानको अन्तिम मस्यौदामा हस्ताक्षर गरे। यति मात्र होईन, हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था वाहेक प्र